Ungashandura sei MTS Vhidhiyo kune Imwe Fomati paLinux neVLC | Linux Vakapindwa muropa
Chokwadi wakamboonana mavhidhiyo muMTS fomati kuti haugone kutamba nevamwe vatambi venhau kana zvimwe zvigadzirwa. Kuti ushandure fomati iyi ive yakajairika, senge AVI, MP4, nezvimwe, une mikana yakawanda muLinux, sezvandicha tsanangura pano.
Kana iwe usina kuziva, iyi MTS vhidhiyo fomati inoshandiswa kune yakakwira tsananguro mavhidhiyo, uye inotsigira zvisarudzo zve720p uye 1080p. Kuti ukwanise kuvhura kana kuagadzirisa, iwe ungade chaiyo software inosanganisira mamwe Sony kana Panasonic camcorder. Asi nematanho aya unogona kushandisa zvishoma zvakatarwa vatambi.
Kugona kushandura haudi kuda vashanduri vasinganzwisisike kana mirairo yakaoma, kunyangwe iwe uchikwanisa kuzviita nedzimwe nzira, sekushandisa chishandiso ffmpeg chine simba, pakati pevamwe. Asi pano ini ndichazviratidza graphical uye intuitively uchishandisa VLC. Naizvozvo, iwe unofanirwa kuve neichi media player ichiiswa pane yako system.
Kufunga kuti iwe watove nayo yaiswa, matanho acho yekushandurwa kweMTS Ndizvo:
Dzvanya pane menyu Pakati.
Sarudza Vhura faira.
Kubva pane browser, sarudza iyo MTS.
Zvino, iwe unofanirwa kuenda kumenu zvakare Media.
Asi ino nguva tinya Shandura.
Iwe uchaona kuti hwindo idzva rinovhura, tinya pane Wedzera bhatani. Uye rova ​​bhatani Chinja / Sevha. Uchaona kuti yako MTS faira rinoratidzika senge rakasarudzwa muChinyorwa.
Sarudza chimiro kwaunoda kushandura iyo MTS pakati peavo vanoonekwa (MPEG, FLAC, RAW, AVI, FLV, MP4, MP3,…) muchikamu cheKusarudza muProfile sarudzo.
Mune iyo nyowani yeProfile yekudonhedza menyu, sarudza codec iyo iwe yauchazoshandisa iyo fomati nyowani, senge H.264 + MP3.
Nebhokisi Ongorora, iwe unoratidza kuti iwe unoda kuzvichengeta mudhairekitori iwe raunoratidza uye iine zita raunopa, pamwe nekuwedzera kwawakasarudza (.avi, .mp4, ...).
Vhara hwindo ne Chengetedza.
Dzvanya Tanga uye mirira kuti shanduko ipedze. Wakangwara!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Ungashandura sei MTS Vhidhiyo kune Imwe Fomati paLinux neVLC